Lọ ahịa na-agbanwe ngwa ngwa - ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị. Na omenala, ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na-enwekarị oke uru na oke olu iji mepụta nsonaazụ azụmaahịa ha chọrọ iji lanarị. Anyị na-ahụ ntụgharị ngwa ngwa na mkpọsa ahịa n'oge a ebe teknụzụ na-emewanye ngwa ngwa ma na-abawanye arụmọrụ. Rlọ ahịa ụlọ ahịa ndị na-adịghị erite uru na-anwụ… mana ndị na-ere ahịa na teknụzụ teknụzụ nwere ahịa ahụ.
Gbasaa - ndi mmadu n’azu ahia ebe obula ha no - ma odi n’elu akwa na mbadamba ma obu mgbe ha no n’ulo ngosi gi.